Izintshisekelo kanye nezici zesayensi zasehlobo laseSan Miguel | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Cishe njalo ngonyaka, lapho kuphela uSepthemba, amazinga okushisa aqala ukwehla ngenxa yokufika kwekwindla. Kodwa-ke, phakathi nesonto lika-Septhemba 29, amazinga okushisa anyuka futhi. Lokhu kwaziwa njenge ihlobo laseSan Miguel. Kuyisonto lapho amazinga okushisa enyuka sengathi sibuyele ehlobo.
Kulesi sihloko uzokwazi ukwazi okuthakazelayo nezici zesayensi zasehlobo laseSan Miguel. Ngabe ufuna ukuthola zonke izimfihlo zayo?
1 Likuphi ihlobo laseSan Miguel?
2 Kungani ibizwa ngokuthi yiQuince Summer?
3 Ingabe kukhona ihlobo laseSan Miguel minyaka yonke?
4 Izinkinga namanye amahlobo
5 Amazwi ehlobo laseSan Miguel
Likuphi ihlobo laseSan Miguel?
Lapho ihlobo liqala ukuphela, abantu abaningi bayawesaba lawo mazinga okushisa. Buyela emsebenzini, ubusika obujwayelekile nobunzima. Imvamisa, i-thermometer iqala ukwehla lapho uSepthemba ezungeza futhi kuqala inkathi yokuwa. Noma kunjalo, evikini eliphela ngoSepthemba 29Ngosuku lweSan Miguel, amazinga okushisa anyuka futhi sengathi ihlobo liyabuya.
Ngalesi sikhathi amazinga okushisa ehlobo angama-30 degrees afinyelelwa eSpain. Kunjengokungathi ihlobo liyabuya ukuzovalelisa kuze kube unyaka olandelayo. Igama laleli hlobo elincane kungenxa yokugubha usuku lukaSan Miguel, ngoSepthemba 29.
Kwezinye izindawo kwaziwa njenge I-Veranillo del Membrillo noma iVeranillo de los Arcángeles. Futhi ukuthi yisikhathi esincane esinamazinga okushisa amnandi kakhulu enza ukungena kwamakhaza kube mnandi kakhulu. Kunezinsuku ezithile zalesi sikhathi ukuthi umngcele ngezimo zemvelo ebesinazo ehlobo. Kodwa-ke, izinsuku ezizayo ikwindla ibuya nomoya wayo opholile.
Kuvame ukwenzeka ngasekupheleni kukaSepthemba nasekuqaleni kuka-Okthoba. Lesi sikhathi samazinga okushisa aphakeme asinaki lutho olukhethekile. Izinguquko ezenzeka emkhathini ezibangela ukushintshashintsha kwezinga lokushisa kanye nesimo sezulu esincishisa umoya esivuna isimo sezulu esihle.
Kungani ibizwa ngokuthi yiQuince Summer?
Sishilo ukuthi nayo ithola leli gama futhi kungenxa yokuthi kulezi zinsuku kulapho i-quince ivunwa.
Lesi sikhathi sesikhathi sabhabhadiswa ngabalimi ababekhuluma ngesikhathi sokuvuna lesi sitshalo. Phambilini ama-quinces ayevikelwa unkulunkulukazi wothando u-Aphrodite. Ngakho-ke kuthiwa i-quince isithelo sothando.
Ingabe kukhona ihlobo laseSan Miguel minyaka yonke?
Leli hlobo elincane liyisiqephu sasemkhathini minyaka yonke. Ngalezi zinsuku amazinga okushisa akhuphuka ukuze ahlale isonto bese ehla futhi. I-United States inesimo esifanayo esibizwa ngokuthi Ihlobo laseNdiya (ihlobo laseNdiya). Emazweni akhuluma isiJalimane ibizwa nge-Altweibersommer.
Impela kwenzeka into efanayo kakhulu eningizimu yezwe cishe ngoJuni 24. Kubo, ubusika buqala ngalesi sikhathi. Kodwa-ke, ezinsukwini zosuku lweSan Juan, amazinga okushisa abuya acishe afane nalawa alapha. Le nkathi bayibiza ngokuthi ihlobo laseSan Juan.
Yize kunezisho eziningi zesimo sezulu, isayensi ingachaza inqwaba yalezi zisho nezinkolelo ezithandwayo. Kodwa-ke, kulokhu, asikho isizathu sesayensi sokuthethelela leli hlobo. Kepha kungenzeka uchaze ezinye izimbangela zokuthi kungani kwenzeka.
Ngesikhathi sokuphela kukaSeptemba, ihlobo elisemthethweni seliphelile. Ngalesi sikhathi, imiphumela yokuqala yasebusika isivele iqala ukuzwakala emkhathini. Kungumzuzu obalulekile phakathi kokushintshwa kwezinkathi lapho izinsuku ezipholile zivame ukufakwa nezifudumele. Ngakho-ke, isimo esiguqukayo imvamisa kubangela izinsuku ezimbalwa zesimo sezulu esihle ngemuva kokuwa kokuqala kokushisa ekwindla.
Hhayi minyaka yonke lapho kufanele kube khona ihlobo leSan Miguel. Kungumkhuba oqhubeka unyaka nonyaka kepha akudingeki ukuthi wenziwe.
Izinkinga namanye amahlobo
Kuneminyaka eminingi lapho kube khona ihlobo leSan Miguel, kepha eminye lapho kungenjalo. Kukhona omunye umkhuba ofanayo ngezinsuku eziseduze noNovemba 11, usuku okugujwa ngalo iSan Martín. Kulezi zinsuku sibhekana "nokushaya" okokugcina ehlobo ngokukhuphuka kwamazinga okushisa. Kulokhu, ukukhuphuka akusiyo intaba njengasehlobo, kepha kusikhumbuza intwasahlobo ethe xaxa. Ungasho ukuthi yisikhathi sehlobo esisixwayisa ukuthi sizobuyela kithina kungekudala nokuthi sinokubekezela.
Ukuthi ihlobo ukwenzeka noma cha kuyindaba yamathuba. Izinsuku ezifudumele nezipholile ezishintshanayo zivame kakhulu kulezi zikhathi zesikhashana ezifana nentwasahlobo nekwindla. Babizwa kanjalo ngoba bahambisana nezinsuku zokugujwa kwabangcwele.
Uma sibheka emuva eminyakeni, siyabona ukuthi kube neminyaka lapho singakaze sibe nehlobo leSan Miguel. Sinezikhukhula eMurcia ngo-1664 nango-1919 (ngenqwaba yabantu abafile); ngo-1764 eMalaga, ngo-1791 eValencia nango-1858 eCagagena. NgoSepthemba 29 no-30, 1997, kwaba nezikhukhula ezimbi e-Alicante
Izikhukhula ezisanda kwenzeka ziqala ngoSepthemba 27 kuya ku-29, 2012 zathinta iLorca, Puerto Lumbreras, Malaga, Almería noma Alicante, eyadlula nemiphefumulo eminingana. Ngakho-ke, asikho nesayensi ethile ukuthi lesi siqephu esifudumele kufanele senzeke minyaka yonke.
Amazwi ehlobo laseSan Miguel
Njengoba sazi, isisho esidumile icebile kakhulu kukho konke okuphathelene nesimo sezulu nezitshalo. Kulokhu, lezi yizisho ezaziwa kakhulu zalezo zinsuku:
KuSan Miguel, ukushisa okukhulu, kuzoba yinani elikhulu.
Ehlobo laseSan Miguel kunezithelo ezinjengoju
NgoSepthemba, ekupheleni kwenyanga, ukushisa kuyabuya futhi.
OkwaSan Miguel, okokuqala i-walnut, i-chestnut kamuva.
Ihlobo laseSan Miguel alitholakali kakhulu
Zonke izithelo zilungile ngokushisa kweSan Miguel.
Ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngaleli hlobo elincane esiligubha ngenjabulo lapho sibhekene namaconsi aseduze kwamazinga okushisa ekwindla kanye nokufika kobusika obubandayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Ihlobo laseSan Miguel